Apple Inoburitsa Ina Yemhuka Emoji Packs | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication, iOS 10
Apple payakaunza iyo Apple Watch, zvakare yakaunza nzira nyowani dzekutaurirana, senge Dhijitari Kubata, kutumira kupururudza kwedu kana mamwe ehupenyu emoji airatidzika kunge akanaka kwazvo. Dambudziko nemaitiro matsva aya nderekuti anogona kungoshandiswa kubva kuApple Watch kuenda kuApple Watch, ndosaka vazhinji vasingakwanise kushandisa iyo Dhijitari Kubata, semuenzaniso. Asi izvo zvinoshanduka muIOS 10, mune yayo Messages application kuti ive yakanyanya kutaurwa, uye nekuwedzera kuona iyo Apple yaiswa mana mapepa ekunamatira izvo zvine animated emojis senge iwo ari paApple Watch.
Iwo mapakeji mana, atove kuwanikwa muApp Store kune ese zvishandiso zvine iOS 10 yakaiswa, Ivo (vari muhurongwa) Smileys, Maoko, Mwoyo neClassic Mac, yekupedzisira haisi mumufananidzo unotungamira iyi posvo uye ipakeji senge iyo yataive tatoiwana nekusarudzika muMessage (yeIOS 10) asi kuratidza mifananidzo inofamba. Zvingaitwe sei neimwe nzira, kurodha kwayo kuri mahara zvachose.
Emoji yehupenyu yeApple Watch inosvika kuMessage
Kana tangoisa, kana tichida kuwana aya matsva ekunamatira tinofanirwa kubata museve wekurudyi padivi pebhokisi remavara (1), bata chiratidzo cheApp Store (2), wobva wabata mapoinzi mana muzasi kuruboshwe (3), sarudza pasuru uyezve chinamirwa.
Sezvo isu tichiri mune yekutanga beta, zvirinani pakutanga havashande zvakatsetseka, kuve vanopererwa kana vachifanira kutakurwa uye kutumirwa. Muchokwadi, mumuyedzo wangu wekutanga ndakatumira moyo mitatu neruoko nekuti hazvina kuoneka mubhokisi remavara. Chero zvazvingaitika, kana tichifunga kuti vanoshanda zvakakwana paApple Watch, ndine chokwadi chekuti vachashanda sezvavanofanira kana iOS 3 yaburitswa zviri pamutemo. Uye chii chiri nani, pachave nekuve nezvimwe zvezvinamato zvechitatu. Tsitsi ndedzekuti iMessage haina kushandiswa zvakanyanya munyika kubva kunonyora server.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple inotangisa mana eanonyorwa emoji mapake eMessage, matatu acho seApple Watch
Mhoroi, Pablo. Kwete chete munyika yako isinganyanyo shandiswa
iMessage, iyo nyaya yekupinza uye inorambidza munyika yega yega idambudziko iro Apple risingakwanise kutarisana naro pamwero mukuru, semuenzaniso ndinogara kuArgentina uko
Iyo yekupedzisira iPhone yaungatenge kubva kune anoshanda yaive iyo iPhone 4S. Mushure meizvozvo kupinzwa kunze kwakavharwa, kana ukatenga iPhone kune imwe nyika, kuairport vanoita kuti ubhadhare 50% yemutero, saka vanoedza kuverevedza vachipfuura .. Zvinopenga kana uchinge uine yako yakanaka iPhone kuArgentina iwe haikwanise kunakidzwa ne100% nekuti semuenzaniso iyo Mepu App haina kunyatsoita 100% inoshanda, Apple Pay haipo, Wallet: zvinoenderana nekuti unoishandisa sei uye nezvayo, Nhau haipo, kushandiswa kweMessage kuri kushoma sezvo iri musika unotongwa ne android (inogara ichitaura nezveArgentina) zvakafanana neFaceTime. Ngatitarisirei kuti Apple inowedzera muLatin America ...: kana ndikarangarira nemazvo, ndanga ndaverenga pane ino webhusaiti kuti Apple yaizowedzera kuMexico, Argentina nePeru? (Iyo yekupedzisira ini handina chokwadi).
Hamusi imi mega, imi vakadzi, munopfuura nemumiganhu yebasa raApple (zvinosuwisa).
Ndine urombo nemazwi asinganzwisisike kana typos, asi ini ndanga ndichitasva haha.